Nyaya Yeupenyu: Zvinhu Zvese Zvinobvira Kuna Jehovha | Beishenbai Berdibaev
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Amis Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Douala Dutch Edo Efik Esan Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kamba Kannada Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Zvinhu Zvese Zvinobvira Kuna Jehovha
Yakataurwa naBeishenbai Berdibaev
“RUFU ruchange rusisipo, uye kunyange vakafa vachavazve vapenyu.” Mudzimai wangu, Mairambubu, akanzwa mashoko aya paaiva mubhazi. Akazvifarira uye akada kudzidza zvakawanda. Bhazi parakamira richidzikisa vanhu, akamhanyira mukadzi akanga ataura mashoko iwayo. Mukadzi wacho ainzi Apun Mambetsadykova, uye aiva mumwe weZvapupu zvaJehovha. Mazuva iwayo, kutaura neZvapupu kwaiva nengozi, asi zvatakazodzidza kubva kuna Apun zvakachinja upenyu hwedu.
KUSHANDA KUBVA MAMBAKWEDZA KUSVIKA RUBVUNZAVAENI
Ndakaberekwa muna 1937 pane rimwe purazi pedyo netaundi rinonzi Tokmok, muKyrgyzstan. Tiri verudzi rwechiKyrgyz, uye tinotaura mutauro wechiKyrgyz. Vabereki vangu vaishanda papurazi kubva mambakwedza kusvika rubvunzavaeni. Vashandi vemumunda vaigara vachipiwa zvekudya, asi vaibhadharwa nemari kamwe chete pagore. Zvaisava nyore kuti amai varere ini nehanzvadzi yangu. Ndakangoenda kuchikoro kwemakore mashanu, ndichibva ndatanga kushandawo papurazi racho.
Makomo eTeskey Ala-Too
Munharaunda yandaigara, urombo hwakanga hwakanyanya, uye taifanira kushanda zvakaoma kuti tiwane cheuviri. Panguva iyoyo ndaisambonyanya kufunga nezvechinangwa cheupenyu kana ramangwana. Handina kumbobvira ndafungidzira kuti chokwadi chinoshamisa pamusoro paJehovha Mwari nechinangwa chake chaizochinja upenyu hwangu. Kupararira kwakaita chokwadi ichocho muno muKyrgyzstan kunonakidza chaizvo. Zvakatangira munharaunda yedu kuchamhembe kweKyrgyzstan.
VANHU VAIMBOVA VASUNGWA VANOUNZA CHOKWADI MUKYRGYZSTAN
Chokwadi pamusoro paJehovha chakatanga kupinda muKyrgyzstan kuma1950. Kuti izvozvo zviitike, chokwadi chaifanira kukunda dzidziso dzechiKomonisiti. Nemhaka yei? Panguva iyoyo, Kyrgyzstan yaiva pasi peUnion of Soviet Socialist Republics (USSR). MuUSSR yese, Zvapupu zvaJehovha zvakaramba zvisina divi razvaitsigira panyaya dzezvematongerwo enyika. (Joh. 18:36) Saka zvaitambudzwa zvichinzi vavengi vehurumende yechiKomonisiti. Asi hapana dzidziso dzevanhu dzinogona kutadzisa Shoko raMwari kusvika mumwoyo yevanhu vanoda chokwadi. Chimwe chezvidzidzo zvinokosha zvandakawana muupenyu hwangu hwese ndechekuti naJehovha, “zvinhu zvose zvinobvira.”​—Mako 10:27.
Kutambudzwa kweZvapupu zvaJehovha kwakaita kuti zviwande muKyrgyzstan. Nei zvakawedzera? USSR yaisanganisira nharaunda yeSiberia, uko kwaiendeswa vavengi vehurumende. Vanhu ivava pavakasunungurwa, vakawanda vakauya kuKyrgyzstan, uye vamwe vavo vakaunza chokwadi. Mumwe wevanhu ivavo aiva Emil Yantzen, uyo akaberekerwa muKyrgyzstan muna 1919. Emil akaendeswa kumusasa wevasungwa uye ikoko akaonana neZvapupu. Akagamuchira chokwadi uye akadzoka kumba muna 1956. Emil akatanga kugara pedyo netaundi rinonzi Sokuluk, munharaunda yedu. Ungano yekutanga muKyrgyzstan yakaumbwa muna 1958 muSokuluk.
Pashure perinenge gore, Victor Vinter akatamira kuSokuluk. Hama iyi yakatendeka yakatambudzwa kakawanda. Kaviri akatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu nemhaka yekusapindira mune zvematongerwo enyika, uye akazoita mamwe makore 10 ari mujeri nemamwe mashanu ari musungwa kuSiberia. Kunyange zvakadaro, kutambudzwa hakuna kumisa kupararira kwaiita kunamata kwechokwadi.
CHOKWADI CHINOSVIKA PEDYO NEKUMBA
Pakazosvika 1963, muKyrgyzstan makanga mava neZvapupu zvinenge 160, uye vakawanda vavo vaibva kuGermany, Ukraine, neRussia. Zvapupu zvacho zvaisanganisira Eduard Varter, uyo akabhabhatidzwa ari kuGermany muna 1924. Mumakore ekuma1940, vaNazi vakanga vamuendesa kumusasa wevasungwa, uye pashure pemakore mashoma, maKomonisiti emuUSSR akaendesa Eduard kuSiberia ari musungwa. Muna 1961, hama iyi yakatendeka yakatamira mutaundi rinonzi Kant, iro riri pedyo chaizvo neredu.
Elizabeth Fot, mushumiri waJehovha akavimbika, aigarawo muKant. Aiita basa rekusona. Aigona basa rake zvekuti vanhu vakadai savanachiremba nematicha vaisonesa hembe kwaari. Mumwe mukadzi waaisonera ainzi Aksamai Sultanalievazi, uye ainge akaroorwa nemukuru mukuru aishanda muhofisi yemuchuchisi. Aksamai akaenda kuna Elizabeth kuti anosonerwa hembe, asi akabvunza mibvunzo yakawanda nezvechinangwa cheupenyu uye kuti chii chinoitika munhu paanofa. Elizabeth akapindura mibvunzo yacho achishandisa Bhaibheri. Aksamai akava muparidzi anoshingaira wemashoko akanaka.
Panenge panguva iyoyo, Nikolai Chimpoesh, anobva kuMoldova, akagadzwa kuti ashande semutariri wedunhu uye akaita basa iroro kwemakore anoda kusvika 30. Nikolai aisangoshanyira ungano chete asi airongawo kuti mabhuku edu aprindwe uye aparadzirwe. Zvaaiita zvaionekwa nemapurisa. Saka Eduard Varter akapa Nikolai zano rekuti: “Kana mapurisa akakubvunza, audze zvazviri kuti mabhuku edu anobva kumahofisi edu makuru kuBrooklyn. Tarisa mupurisa weKGB mumaziso chaimo. Hapana chaunofanira kutya.”​—Mat. 10:19.
Vachangobva kutaura izvi, Nikolai akashevedzwa kumahofisi makuru emapurisa eKGB muKant. Anotaura zvakazoitika achiti: “Mupurisa akandibvunza kwataiwana mabhuku edu. Ndakamuudza kuti anobva kuBrooklyn. Akabva ashaya zvekutaura. Akanditi ndiende uye haana kuzondishevedza zvakare.” Zvapupu izvozvo zvainge zvisingatyi zvakaramba zvichiparadzira mashoko akanaka nekungwarira munharaunda yedu kuchamhembe kweKyrgyzstan. Vanhu vemumhuri medu pavakazoziva chokwadi chinokosha pamusoro paJehovha kuma1980, mudzimai wangu, Mairambubu, ndiye akatanga kuchinzwa.
MUDZIMAI WANGU ANOKURUMIDZA KUONA CHOKWADI
Mairambubu anobva kuNaryn Region muKyrgyzstan. Rimwe zuva muna August 1974, akashanya kumba kwehanzvadzi yangu, uye ndipo patakatanga kuonana. Ndakabva ndangofarira Mairambubu uye takachata zuva iroro.
Muna January 1981, Mairambubu paaiva mubhazi achienda kumusika, ndipo paakanzwa mashoko ataurwa kwatangira nyaya ino. Mudzimai wangu aida kunzwa zvakawanda, saka akabvunza mukadzi wacho zita rake nekero. Akamuudza kuti anonzi Apun, asi ainge akangwarira nekuti kunyange kuma1980 basa reZvapupu rainge rakabhanwa. Pane kuti ape mudzimai wangu kero yake, Apun akakumbira kero yedu. Mudzimai wangu akasvika kumba achifara.
“Nhasi ndanzwa zvinhu zvinoshamisa,” akadaro Mairambubu. “Mumwe mukadzi andiudza kuti pasina nguva vanhu vachange vasisafi. Kunyange mhuka dzemusango dzichange dzisisatyisi.” Kwandiri zvaiita sengano. Saka ndakapindura ndichiti, “Ngatimumirirei kusvika auya kuzotiudza zvinhu izvozvo.”
Apun akatishanyira papera mwedzi mitatu. Takazoramba tichishanyirwa nezvimwe Zvapupu zvekutanga zverudzi rwechiKyrgyz. Hanzvadzi idzi dzakatiratidza chokwadi chinoshamisa pamusoro paJehovha uye chinangwa chaakasikira vanhu. Vaitidzidzisa vachishandisa bhuku rinonzi Kubva kuParadhiso Yakarasika kuParadhiso Ichawanikwazve. * Uye sezvo paingova nebhuku iroro rimwe chete, mumwe nemumwe akazvikopera rake.
Chimwe chezvinhu zvatakatanga kudzidza hwaiva uprofita huri pana Genesisi 3:15. Uprofita ihwohwo huchazadziswa pachishandiswa Jesu, Mambo Mesiya. Iwayo mashoko anokosha anofanira kunzwiwa nevanhu vese! Ndicho chikonzero nei tichifanira kubatana nevamwe pakuzivisa mashoko acho. (Mat. 24:14) Pasina nguva, chokwadi cheBhaibheri chakatanga kuchinja upenyu hwedu.
KUPINDA MISANGANO UYE KUBHABHATIDZWA PATAINGE TAKABHANWA
Imwe hama yechiKristu yaiva muTokmok yakatikoka kumuchato. Ini nemudzimai wangu takaona kuti maitiro eZvapupu akasiyana neevamwe vanhu. Pamuchato wacho paisava nedoro uye zvaiitwa pakupemberera kwacho zvainge zvakarongeka. Izvi zvainge zvakasiyana chaizvo nezvaiitwa kumichato yatakamboenda. Vanhu vainge vakokwa vaiwanzodhakwa, vairasa unhu, uye vaitaura mashoko akaipa.
Taipindawo misangano yechiKristu neungano yaiva muTokmok. Misangano yacho yaiitirwa musango mamiriro ekunze paainge akanaka. Hama nehanzvadzi dzaiziva kuti mapurisa aigara achitiongorora, saka hama dzakaita kuti pave nevanenge vachitarisa kuti tisabatwa nemapurisa. Munguva yechando taiitira misangano mumba. Mapurisa akasvika kaviri pamba pacho ndokubvunza zvataiita. Ini naMairambubu patakabhabhatidzwa muna July 1982 murwizi runonzi Chüy River, taifanira kungwarira. (Mat. 10:16) Hama dzakasvika dziri zvikwata zvevanhu vashoma vashoma uye takaungana musango. Takaimba rwiyo rweUmambo ndokuteerera hurukuro yerubhabhatidzo.
TAKASHANDISA MUKANA WEKUWEDZERA USHUMIRI HWEDU
Muna 1987 imwe hama yakandikumbira kuti ndishanyire munhu aifarira chokwadi aigara mutaundi reBalykchy. Zvaida maawa mana ndichifamba nechitima kuti ndisvike ikoko kubva kumba kwedu. Pashure pekuenda kanoverengeka kuBalykchy, takaona kuti kwaiva nevanhu vakawanda vaifarira chokwadi. Uyu waiva mukana wekuti tiwedzere ushumiri hwedu.
Ini naMairambubu taiwanzoenda kuBalykchy. Kakawanda taigara ikoko pamazuva ekupera kwevhiki tichiita ushumiri uye misangano yechiKristu. Vanhu vaida mabhuku vakawedzera zvinoshamisa. Taitakura mabhuku kubva kuTokmok tichishandisa masaga aiisirwa mbatatisi. Masaga maviri emabhuku pamwedzi aisakwana. Kunyange pataiva muchitima tichienda kana kubva kuBalykchy, taikwanisa kuparidzira vanhu.
Muna 1995, kuBalykchy kwakaumbwa ungano, pashure pemakore 8 kubva patakatanga kuendako. Takashandisa mari yakawanda mumakore iwayo ataienda kuBalykchy tichibva kuTokmok. Taingova nemari shomanana, saka takazvifambisa sei? Imwe hama yechiKristu yaigara ichitipa mari yekushandisa. Jehovha akaona chido chedu chekuwedzera ushumiri hwedu, uye akativhurira “magedhi emvura okumatenga.” (Mar. 3:10) Chokwadi, zvinhu zvese zvinobvira kuna Jehovha!
KURIRITIRA MHURI UYE KUITA USHUMIRI
Muna 1992, ndakagadzwa kuva mukuru, uye ndini ndaiva mukuru wekutanga werudzi rwechiKyrgyz munyika macho. Muungano yedu yemuTokmok, makava nemikana yekuwedzera ushumiri. Taidzidza Bhaibheri nevana vechikoro vakati kuti vechiKyrgyz kuzvikoro zvavo. Mumwe wevana ava ari muDare Rebazi, uye vamwe vaviri mapiyona chaiwo. Taibatsirawo vamwe pamisangano yedu. Makore ekuma1990 achangotanga, mabhuku edu uyewo misangano zvaiva mumutauro wechiRussian. Asi vakawanda vaitaura chiKyrgyz. Saka ndaiturikira, uye zvaivabatsira kuti vakurumidze kunzwisisa chokwadi.
Ndiine mudzimai wangu nevamwe vana vedu 8 muna 1989
Ini naMairambubu tainge takabatikanawo nekurera mhuri yedu yaiwedzera kukura. Taienda nevana vedu kunoparidza uye kumisangano yeungano. Mwanasikana wedu Gulsayra, uyo aingova nemakore 12 panguva iyoyo, aifarira kutaura nevanhu mumugwagwa uye kuvaudza nezveBhaibheri. Uye vana vedu vaida chaizvo kubata Magwaro nemusoro. Izvi zvakaita kuti vana vedu uye vazukuru vatakazova navo vabatanidzwewo pazvinhu zvine chekuita nekunamata muungano. Pavana vedu 9 nevazukuru 11 vachiri vapenyu, 16 vanoshumira Jehovha kana kuti vanopinda misangano nevabereki vavo.
Hama nehanzvadzi dzakatanga basa raJehovha munzvimbo yedu kuma1950 dzinogona kushamiswa nekuona kuchinja kwakazoita zvinhu. Semuenzaniso, kubvira kuma1990 tange tiine rusununguko rwekuparidza mashoko akanaka uye kuungana pamwe chete takawanda.
Ndiine mudzimai wangu muushumiri
Muna 1991, ini nemudzimai wangu takapinda gungano guru rekutanga muAlma-Ata, yava kunzi Almaty, muKazakhstan. Uye muna 1993, hama dzemuKyrgyzstan dzakava negungano kekutanga munhandare inonzi Spartak Stadium muBishkek. Vaparidzi vakaita vhiki vachichenesa nhandare yacho gungano risati raitwa. Maneja wepo akafadzwa nazvo zvekuti akatibvumira kushandisa nzvimbo yacho tisingabhadhari.
Muna 1994, takatanga kuprinda mabhuku edu ekutanga mumutauro wechiKyrgyz. Mabhuku ava kugara achishandurirwa muchiKyrgyz nevashanduri vari pahofisi yebazi muBishkek. Muna 1998, basa reZvapupu rakazobvumirwa zviri pamutemo muKyrgyzstan. Vaparidzi vawanda zvekuti pari zvino tava kupfuura 5 000. Iye zvino tava neungano 83 uye mapoka 25 mumitauro inoti, Chinese, Chirungu, Kyrgyz, Russian, Mutauro Wemasaini wekuRussia, Turkish, Uighur, neUzbek. Hama nehanzvadzi dzese idzi dzinobva kwakasiyana-siyana dziri kushumira Jehovha dzakabatana. Jehovha akaita kuti zvinhu zvese izvi zvinoshamisa zviitike.
Jehovha akachinjawo upenyu hwangu. Ndakakurira mumhuri yakaderera yaishanda papurazi, uye ndakaenda kuchikoro kwemakore mashanu chete. Asi Jehovha akandibatsira kushumira semukuru uye kudzidzisa chokwadi chinokosha kuvanhu vakadzidza kundipfuura. Zvechokwadi Jehovha anoita kuti zvinhu zvinoshamisa chaizvo zviitike. Zvakaitika kwandiri zvinoita kuti ndirambe ndichipupura nezvaJehovha, uyo kwaari “zvinhu zvose zvinobvira.”​—Mat. 19:26.
^ ndima 21 Rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha asi harichaprindwi.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvinhu Zvese Zvinobvira Kuna Jehovha
Kutsungirira Matambudziko Kunounza Makomborero